Musical – Channel Myanmar
Mamma Mia! (2008) Mamma Mia! (2008) IMDb - 6.4/10_____Rotten - 54% ဒီတဈခါတော့ 2008 ခုနှဈက ထှကျခဲ့တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုပျရှငျတဈကားနဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။"အရမျးလေးတဲ့ရုပျရှငျတှကေိုလညျး မကွညျ့ခငျြဘူး ၊ ပေါ့ပကျြပကျြရုပျရှငျတှကေိုလညျး ကွညျ့မိမှာစိုးတယျ" ဆိုတဲ့ သူတှအေတှကျ ဒီဇာတျကားကတော့ အဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။နစေ့ဉျပငျပနျးနှမျးနယျမှုတှထေဲကရုနျးထှကျဖို့ ရုပျရှငျတဈကားကွညျ့ပွီး စိတျပေါ့ပါးလနျးဆနျးသှားခငျြတယျဆိုရငျ ဒီ ရုပျရှငျလေးကို ကွညျ့ဖို့တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။နာမညျကတော့ "Mamma Mia!" ဖွဈပါတယျ။Meryl Streep ၊ Pierce Bronsnan ၊ Colin Firth ၊ Stellan Skarsgard ၊ Dominic Cooper ၊ Amanda Seyfried စတဲ့ နာမညျကြျောသရုပျဆောငျတှေ ပါဝငျထားပါတယျ။Lesbian တယောကျဖွဈတဲ့ Phyllida Lloyd အတှကျ Mamma Mia! ပထမဆုံးဒါရိုကျတာအဖွဈရိုကျကူးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ရုပျရှငျရဲ့ကုနျကစြရိတျက $52 million သာဖွဈပွီး တကယျ ရုံတငျပွသခဲ့တဲ့အခါ $609.8 ...
IMDB: 6.4/10 208,127 votes
Munna Michael (2017) မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကို စံနမူ နာထား လေးစားအားကျရင်း ဘ၀ ရပ်တည်မှုအတွက် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်အ ကြောင်း ဇာတ်အိမ်တည်ထားတာ ပါ။အကသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မိုက်ကယ်ဟာ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကို လေးစားအားကျသူဖြစ်ပြီး တစ်ရက်မှာတော့ အလုပ်ထုတ်ခံလိုက် ရလို့ စတူဒီယိုကနေ ပြန်လာတုန်း လမ်းဘေးမှာ စွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ မွေးကင်းစကလေးလေးတစ်ဦးကို တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကလေးကို မိုက်ကယ်ကခေါ်ယူမွေးစားခဲ့ပြီး မွန်နာလို့နာ မည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မွန်နာဟာ မိုက်ကယ်ရဲ့ခြေရာကို နင်းနိုင်သူ တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပြီး အကမှာ သူမတူအောင်ထူးချွန်သလို သူက လည်းပဲ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကို ရူးရူးမိုက်မိုက်ကို သဘောကျသူ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်ကယ်ကတော့ မွန်နာကို အကသမားမဖြစ်စေချင်ဘဲ အဆင့်မြင့်တဲ့ အလုပ်အကိုင်ရစေ ချင်နေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ မွန်နာ ကတော့ သူ့ရဲ့အကအဖွဲ့နဲ့အတူ ကလပ်တွေမှာ လိုက်ပြီးတခြား အဖွဲ့တွေ၊ စိန်ခေါ်ပွဲတွေ ယှဉ်ပြိုင် ရင်း ၀င်ငွေရှာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ရက် မှာတော့ မိုက်ကယ်ကျန်းမာရေး မကောင်းဖြစ်ပြီး ဆေးရုံတက်ခဲ့ရ ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ...
IMDB: /10 1351 votes